လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်တွေ ပျောက်ဆုံးနေပြီလား – Live the Dream
ကျွန်တော်တို့လူငယ်တော်တော်များများကို စိန်ခေါ်နေတဲ့အရာတွေများစွာရှိပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များပြားတော့ မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို သင်ယူတဲ့အချိန်မှာ အခက်အခဲများစွာရှိသလို ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ရှာဖွေတဲ့အခါ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု၊ စိတ်အား ညိုးငယ်မှုတွေရင်ဆိုင်လာရပါတယ်။ အလုပ်ခွင်ထဲက လူတွေကလည်း ဒီအလုပ်ကြီးကို မလုပ်ချင်တော့ဘူး စွန့်လွှတ်လိုက်ချင်ပြီ..အတတ်ပညာကို လေ့လာနေသူတွေကလည်း ဒီစာကို လုပ်ဖို့ မတက်ကြွနိုင်တော့ဘူး.. လုပ်လေပိုခက်လေ စသည်ဖြင့် လိုအပ်ချက်များတော့ စိန်ခေါ်မှုများတယ်.. ကျရှုံးအောင်သွေးဆောင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်စီအလုပ်အကိုင်ရှိမှလည်း လူဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ရှိမှာလေ… အလေလိုက်ပျင်းရိနေလို့ လူဖျင်းတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး ဘာများသာလိမ့်မှာလဲ?
ကိုယ်ကနေတဲ့ ဇာတ်ရုပ်တွေထဲမှာ ကောင်းမွန်စွာကပြနိုင်ဖို့ အချိန်တိုင်းနိုးကြားတက်ကြွဖို့လိုတယ်။ ဆိုလိုတာက ကိုယ်ရတဲ့ဘဝ ကြိုးစားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာ… လူဆိုတာလည်း limit ရှိတာကြောင့် တစ်ခါတစ်လေတော့ မရတော့ ဘူး.မလုပ်နိုင်တော့ဘူး.. မတပ်နိုင်တော့ဘူး စသည်ဖြင့် လက်လျှော့ချင်လောက်အောင် အင်အားယုတ်လျော့မှုများကို ကြုံလာနိုင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီအရာက ကိုယ့်ကို ကျရှုံးစေမယ့် နွံတောကြီးဗျ… ဒီတော့ ဒီလို ဖြစ်လာရင် ဘယ်လို ရုန်းထွက်မလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်…
အခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်လာရလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေမနပ်ဖြစ်ရတဲ့အခါ ငါကို က အသုံးမကျတာဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်တင်တတ်သလို ဟိုလူကြောင့် ၊ ဒီလူကြောင့် စနစ်တွေကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမနိုင်ပဲ သူများကို မဲတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအပြစ်တင်တတ်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင့်တင်ပေးမှာမဟုတ်သလို လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ကို ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးအရာမဟုတ်တာတော့အတိအကျပါပဲ။ ဒီလိုအပြစ်တင်တတ်တာကို တော့အထူးသတိပြုပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ သူများကိုလက်ညိုးမထိုးပဲ ကိုယ်က ပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် ပိုလုပ်ရမယ်။ တစ်ခုခုပြောင်းလဲချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာကို တော့သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ မရဘူးသေးတဲ့အရာကို လိုချင်ရင် မလုပ်ဘူးသေးတဲ့အလုပ်ကို လုပ်ရမယ်ဆိုတာ လေးနက်စွာစဉ်းစားတတ်ဖို့ဦးစွာပြောပါရစေ…
စိတ်မပါပဲနဲ့ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်မယ်ဆိုရင် မတွင်ကျယ်သလိုပေါ့ ကျွန်တော်တို့ အာရုံမစိုက်နိုင်တော့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လုပ်ပါဟဲ့.. လေ့လာပါဟဲ့..ဆိုပြီးတွန်းအားတွေ ဇွတ်ပေးနေတာလည်း ကိုယ့်ရဲ့ခံနိုင်ရည်ထက်ကျော်လွန်တဲ့ဝန်ကို ထမ်းခိုင်းသလိုပါပဲ။ လူဆိုတာ အသွေးအသားနဲ့တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်လို့ ကန့်သတ်ချက်တာဖြစ်လို့ အာရုံမစိုက်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ အကောင်းဆုံးက တော့ အနားယူဖို့ပါပဲ။ အလျှော့ပေးပါလို့ ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
ခဏတာ ခေါင်းအေးသွားအောင် လန်းဆန်းသွားအောင် ကိုယ်ဝါဿနာပါရာတစ်ခုခုဆီအာရုံလွှဲလိုက်တာမျိုး၊ စိတ်ပြေလက်ပျောက်တစ်ခုခုလုပ်တာမျိုးကို လုပ်သင့်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကို သေသေချာချာပြန်ပြီး အာရုံစိုက်ပေါ့။ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတာကို အာရုံစိုက်နိုင်လေလေ ပိုမိုအကျိုးဖြစ်လေလေ ရှေ့ဆက်လျှောက်ဖို့ခွန်အားပိုမိုဖြစ်လေလေ ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် လုပ်ဆောင်မယ့်အလုပ်တွေ၊ သင်ယူမှုတွေမှာ အာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမယ့်အရာတွေရဲ့အဝေးမှာဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ ပေါ့ပါးစွာ စတင်ပါ
လောဘတစ်ကြီးနဲ့ Plan တွေကို အကြီးကြီးချထားပေမယ့် လုပ်မှ လုပ်နိုင်ပါ့မလား? အောင်မြင်ပါ့မလား စိတ်ပူရတဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အိပ်မက်တွေအကြီးကြီးမက်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအရာတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် လက်တွေ့ကျတဲ့လုပ်ဆောင်မှုသေးသေးလေး ပိုလို့အရေးကြီးပါတယ်။
အိပ်မက်အကြီးကြီးတွေ၊ Goal အကြီးကြီးတွေကိုပဲ မြင်ပြီး အဲ့သည်အရာတွေအတွက် အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကိ မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့လမ်းကြောင်းက ရောက်ချင်ရာရောက်ဖြစ်စေမှာပါ။ အဆုံးမှာ စိတ်တွေပူပင်ပြီး လုပ်နိုင်ပါ့မလား? လက်လျှော့လိုက်တာကောင်းမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ဒီရည်မှန်းချက်အကြီးကြီးတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမယ်။ ကိုယ်လက်လှမ်းမှီတဲ့အတိုင်းအတာလေးနဲ့ အဆင့်သေးသေးလေးတွေကို ချသွားမယ်။ ဒါတွေကို အောင်မြင်အောင်အရင်လုပ်မယ် ပြီးမှ တကယ့်ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်ထည်ဖော်ဖို့ဦးတည်မယ်ဆိုရင်တော့ ပေါ့ပါးစွာကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီဆိုတာ မြင်သာနေတာပဲမဟုတ်လား???
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းက ဘာအတွက်ကောင်းလဲမေးရင် တစ်ရက်တာတိုးတက်မှုက အစ တစ်လတာ , တစ်နှစ်တာ အခြေအနေတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ခြင်းက ကိုယ်မလုပ်ရသေးတဲ့အရာ၊ မပြည့်စုံသေးတဲ့အရာကို မြင်နိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကြောင့်လည်း ခွန်အားဖြစ်ရပါတယ်။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းက ကိုယ်ရှေ့ဆက်မယ့်လမ်းမှာတွန်းအားတစ်ခု၊ လိုအပ်ချက်တွေကိုမြင်စေနိုင်မယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်အတိုင်းအတာနဲ့ကိုယ် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းတွေလုပ်ပါ… မင်မင်ဆိုရင် တစ်ပတ်တစ်ခါ Assessment လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက် အိပ်မက်တေွကိုအကောင်အထည်ဖော်ကြတဲ့အခါ အခက်အခဲတွေက အမျိုးမျိုးပါပဲ။ ဒီကြားထဲ ရည်မှန်းချက်တွေကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေရော၊ အသိအမြင်တွေရောပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်လုပ်ရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အရာကို ကွဲပြားစွာသိအောင်ကြိုးစားပါ။ ဒါတွေကို ဦးစားပေးပါ။ ကြိုးစားရတာ ၊ လေ့လာရတာမောပန်းတဲ့အခါ စိတ်အားမလျှော့ပဲ ရှေ့ဆက်သွားပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂတိကဝတ်ပြုထားပါ။ ချထားတဲ့ Plan တွေအတိုင်းရှေ့ဆက်ပြီး အသစ်သစ်သော Skills တွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို သိမ်းပိုက်ပြီး များစွားသော အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ကြပါစေ။
နောက်ဆုံအနေနဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းလက်ဆောင်ပါးပါရစေ… some people dream of success while other wake up and work hard of it. အိပ်မက်သာသာမဟုတ်ပဲ အောင်မြင်မှုအတွက် ခြေလှမ်းများနဲ့မနက်ဖြန်ကို ကျော်ဖြတ်ကြပါစို့နော်.